SUUQA: Arsenal oo xiriir la sameysay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Real Madrid balse aan hubin mustaqbalkiisa. – Gool FM
SUUQA: Arsenal oo xiriir la sameysay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Real Madrid balse aan hubin mustaqbalkiisa.
(London) 5 Luulyo 2019. Kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa iney xiriir la sameysay daafaca waaya aragga ah ee kooxda Real Madrid Marcelo kaas oo ka mid ah xiddigaha aan hubin mustaqbalkooda kooxda caasimadda.
Daafacaan reer Brazil ee kooxda u saftay in ka badan 500 kulan tan iyo markii uu sanadkii 2007 kaga soo biiray kooxda Fluminense ee dalkiisa hooyo ayaa hadda u muuqda mid aan ku qanacsaneyn siyaasadda lasii filan karo ee Zinedine Zidane uu wax ku maamuli doono fasalka soo aadan.
Kooxda waxey lacago badan kusoo iibsatay daafaca reer France Ferland Mendy iyadoo uu sii joogo wiilka yar ee Sergio Reguilón, sidaas darteed wuxuu walaac ka qabaa sidii uu boos ku heli lahaa fasalka bilaaban doona.
Wargeyska laga leeyahay gobolka Catalonia ee SPORT ayaa shaaca ka qaaday in Marcelo uu doonayo ka bixidda Santiago Bernabeu, sidaas darteed Gunners ayaa xiriir la sameysay si ay xiddigaan uga faa’ideysato.
Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya xiiso uu ka helayo kooxaha Paris Saint Germain, Juventus iyo Ac Milan.
Marcelo kaliya 23-ciyaarood ayuu kasoo muuqday kooxda fasalkii lasoo dhaafay, wuxuuna kooxda kula guuleystay 4-jeer horyaalka La Liga, 4 jeer koobka horyaalada yurub iyo koobab kale oo badan.
Gunners waxey dooneysaa iney daafacaan khibradda leh kooxdeeda keento, balse lama oga hadii ay awoodi karto qiimaha ay Madrid duldhigto xiddigaan hadiiba ay u arkaan inuusan muhiim weyn u aheyn.
“Koobka qarammada Afrika, daafacyadu maantoo dhan wey ku bursanayaan, xitaa haddii aad u istaagto inaad biyo cabto” - Sadio Mané
Frenkie de Jong oo ka gudbay tijaabada caafimaadka ee kooxda Barcelona... +SAWIRRO